FAQs(အမေးများသော မေးခွန်းများ) – PRO1 ONLINE STORE
မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် မည်သို့ ငွေပေးချေရမည်နည်း?
မှာယူထားသည့် ပစ္စည်း အိမ်သို့ရောက်မှ ငွေချေရပါမည်။
စီစဥ် နေဆဲ ဖြစ်၍ ယခုလောလောဆယ် မရရှိနိုင်သေးပါ။
PRO 1 Global Online Sale Website ကို မည်သို့ Register ပြုလုပ်ရပါသနည်း?
ပြုလုပ်ရန် Sign Up ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် အမည်၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အကောင့် စကား၀ှက် များကို ဖြည့်စွက်ပြီး
အကောင့် register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Facebook အကောင့် ဖြင့် တိုက်ရိုက် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
Account Register လုပ်ရာတွင် Register Fees ပေးရပါသလား?
မိမိ Account Password မမှတ်မိလျှင် မည့်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း?
ပထမဦးစွာ Forget Password ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Account ပြုလုပ်စဥ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် ဖုန်းနံပါတ် (သို့မဟုတ်) အီးမေလ်း ရိုက်ထည့်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလျှင် ၎င်းဖုန်းနံပါတ်သို့ OTP code ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထို OTP Code အား ရိုက်ထည့်ပြီး Password အသစ် ပြောင်းနိုင်သည်။ အီးမေလ်းဆိုလျှင် link ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး ထို Link သို့ ၀င်ပြီး Password အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။
Facebook Account နှင့်တိုက်ရိုက် Register လုပ်လို့ရပါသလား?
Account Register ပြုလုပ်သည့်အခါ Continue With Facebook ကို နှိပ်၍ Facebook ဖြင့် တိုက်ရိုက် Register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
PRO 1 Global Home Center ၏ Promotion အစီအစဉ်တွေကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ?
PRO 1 Global Online Sale Website တွင် Promotion ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်သည့်အပြင် PRO 1 Global Home Center များတွင် ပြုလုပ်နေသော အစီအစဉ်များကိုလည်း Official Facebook Page ဖြစ်သည့် PRO 1 Global Home Center Myanmar တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
PRO 1 Global Online Sale Website တွင် ရောင်းချသော ပစ္စည်းနှင့် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချသော ပစ္စည်း အရည်အသွေး တူညီပါသလား?
Order Confirm ပြုလုပ်ပြီးမှ ပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ ပြောင်းလဲလို့ရပါသလား?
ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ပစ္စည်းမပို့ခင် Online Sale Service ဖုန်းနံပါတ် +959777048315, +959777048316ကို ကြိုတင်အ‌ကြောင်းကြားပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
PRO 1 Global Online Sale မှ ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသင့်ပါသနည်း?
အရောင်းစင်တာတွင် ရောင်းချနေသည့်ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင် လာရောက်ကြည့်ရှု ၀ယ်ယူစရာမလိုဘဲ Online Sale မှ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေသည့် အပြင် အိမ်အရောက်ပို့၀န်ဆောင်မှု ရှိသောကြောင့်PRO 1 Global Online Sale မှ ၀ယ်ယူသင့်ပါသည်။
PRO 1 Global Online Sale မှ ပစ္စည်း ဘယ်လို မှာယူရမည်နည်း?
ပစ္စည်းမှာ ယူမှုအဆင့်ဆင့်ကို ဈေးဝယ်သူလမ်းညွှန် Buyer Guide တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပစ္စည်းများ အား Return လုပ်လို့ရနိုင်သလား?
သတ်မှတ်ထားသည့် Retun Policy အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး Retrun ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်အရောက်ပို့၀န်ဆောင်မှု့ ရှိပါတယ်။ ငါးသိန်းဖိုး ၀ယ်ယူပါက သတ်မှတ်ဧရိယာများသို့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
PRO 1 Global Online မှ မှာယူထားသော ပစ္စည်းများကို မည့်သည့်မြို့နယ်များကို ပို့ဆောင်ပေးပါသလဲ
PRO 1 Global Online မှ ပို့ပေးသောမြို့နယ် စာရင်း ကို အောက်ပါလင့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Delivery Service Area ပို့ပေးသောမြို့နယ်များ
ပို့ဆောင်ရမည့်နေရာမှာ အထပ်မြင့်ဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ပါသလား
နှစ်လွှာမှ စ၍ အထပ်မြင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့် ၀န်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရပါမည်။
အထပ်မြင့် အလွှာတင်ဝန်ဆောင်ခ ဇယား ကို အောက်ပါလင့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အထပ်မြင့် အလွှာတင်ဝန်ဆောင်ခ ဇယား
ပစ္စည်းမှာယူပြီး ဘယ်နှရက်အတွင်း ပစ္စည်းပို့ပေးပါသလဲ
၂ ရက်တွင်း (ရုံးချိန်အတွင်း) ပို့ပေးပါတယ်
HKB Pendant Lamp CD002-3 Ks42,000
NWM WL-993004 Tea Cup & Saucer6OZ 180ml Ks3,150
HKB Pendant Lamp CD007-3 Ks49,500
Resend OTP (ကုဒ်ပြန်ပေးပါရန်)(00:60)
Resend OTP (ကုဒ်ပြန်ပေးပါရန်) (00:60)